Esteban González Pons, munyori weEllas. Kubvunzurudza | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo: Esteban González Pons. Twitter nhoroondo.
Hongu Esteban Gonzalez Pons Iye anonyanya kuzivikanwa nebasa rake rezvematongerwo enyika, asi zviri mubhuku rake rekunyora kwaanoti anonzwa kugadzikana. Nhoroondo yake yekutanga ndeye Ivo, uko kwainoenda kukoko ne nyaya yerudo. Vanoda ndinokutendai nemwoyo wose nguva yako uye mutsa wako mukuru mukundipa iyi hurukuro kwaanotiudza zvimwe nezve icho chikamu chemashoko uye zvepedyo.
ESTEBAN GONZÁLEZ PONS - KUSVIRA
LITERATURE NEWS: Nhoroondo yako inotiudzei, Ivo, uye nei nyaya yerudo?
ESTEBAN GONZÁLEZ MAPONI: Ivo kuverenga imwe nyaya yerudo pakati pemusikana nemukomana akazvarwa muma60. Icho nhoroondo yerudzi, about isu vedu takaberekwa Franco achiri mupenyu kana kuti achangofa, Vechidiki veiyo Shanduko. Iyo nyaya yakaiswa, muchidimbu, mu Valencia yeCopa América, iro guta raipenya nekuseka, uye muValencia mushure medambudziko redhina, muchidimbu zvakare. Maguta maviri anopesana ari munzvimbo imwechete pamepu.
EGP: Bhuku rangu rekutanga raive Iyo Ndarama Bug naPoe, muchinyorwa chevechidiki. Kunyangwe ndichifanirwa kutaura kuunganidzwa kwemanovel akachinjirwa kune comic, inonzi Zvechidiki Zvinyorwa Zvishongo, iyo yakawanda yemanovel adventure emuzana ramakore rechiXNUMX akaunzwa pakureba kwangu sediki, kubva Ivanhoe vakakwira Michael Strogoff o sandokan, Semuyenzaniso. Ndichiri kufara pandinovarangarira.
Izvi zvisati zvaitika, ekutanga-mabhuku ekutanga andakaverenga, anga asiri angu, asi pachikwereti kubva kuna babamunini vangu Guillermo, aive maalbum Mortadelo uye Filemon. Nekuti Ini ndinodzivirira kuti ivo vanopa Mambokadzi weAsturias weZvivakwa kunaF, nekuti ndine chokwadi chekuti inotevera Mubayiro weNobel muzvinyorwa zveSpanish ichave yakaverengerwa paudiki hwake kuMortadelo neFiremon
Ndinonyora sezvo ndichigona kurangarira. Pakutanga, Nyaya dzinotyisa kufurirwa naPoe uye zvakare nyaya dzeHondo yeRusununguko kutevedzera yekutanga nhevedzano ye Zvikamu National uye iyo biography ye Napoleon rakanyorwa naEmil Ludwig. Ipapo vasikana vakava nyaya yangu yega uye ndakatanga kunyora nhetembo dzakaipisisa.
EGP: Ukatanga kuverenga mabhuku ese ivo vanokurova. Iyo iyo zvimwe yaindifungisisa ini zvakanyanya sejaya Ishe wemhete, makore mazhinji mafirimu asati amuita mukurumbira. Zvinondinetsa kana iyo cinema ichigadza mabhuku andinofarira uye nekukurudzira rangano yayo sekunge inogona kupatsanurwa kubva kumabhuku ayo. Tolkien akange andibata zvekuti akanyora nhetembo mu "elvish" yevasikana, uye hapana kana aida kuve wangu musikana, hongu. Ini ndinofunga Tolkien akandiita geek.
EGP: Kana iwe uchida zvinyorwa ndizvo casi zvisingaite kutaura munyori anodikanwa nekuti anenge munhu wese ane chimwe chinhu chinokunakidza. Ndichataura Becquer, uyo ane Ngano, nekuti ini ndinotendeukira kwaari zvakanyanya kuti chimwe chinhu chinamatire kwandiri. Uye nekuti ini ndoda kuve anodanana, kunyangwe ndichiziva kuti handikwanise. Zvakare ku Delibes, mumwe izvozvo ikozvino Chikumburidzo, yandaiverenga ndoverengazve kuverenga chiSpanish. Uye kuValle-Inclán, iye wandinayo pane yangu husiku pari zvino.
Pakati pevanyori, Luis Cernuda, Mutumwa Gonzalez naAntonio Colinas, akasiyana kwazvo, ndevamwe vandinoda. Ngatiiseiwo Joan Margarite kuti takangofa. Pakati peavo vari kutsikisa izvozvi, pasina chinangwa chekuzadza, ndakaverenga zvese zvavanoburitsa Manuel Vilas, Victor weMuti, Lawrence Silva, Jose Zoilo kana Santiago Castellanos, semuenzaniso.
EGP: Iyo inopenga protagonist ye Chakavanzika cheiyo haunted crypt rakanyorwa naEduardo Mendoza. Zvinotaridzika sezvisingakundike mutsika yeSpanish hutsinye. Kunyangwe zvingaite senge zvakapusa kwauri, ini ndinofunga kuti iyo isiri picaresque haisi yeSpanish novel.
EGP: Pandaive mudiki ndakanyora husiku, zvino mangwanani. Pakutanga ini ndinomuka nekuvandudza mafungiro angu. Uye mazano akanakisa anouya mupfungwa mushower. Pandinobuda mushower ndinokanganwa vanenge vese.
EGP: Ndingashinga nditaure here? Ndinoda kunyora ndiri pamubhedha. Kumuka pamatanhatu, semuenzaniso, kutora kofi uye komputa kunorara uye kusabuda ipapo kusvikira ndave neanenge maviri mapeji akanyorwa. Nehurombo ini ndinogona kungozvigona izvozvo pakupera kwevhiki. Ivo Ndakainyora mundege nezvitima uye mumakamuri ekumirira. Kufamba kwebasa kubva pano kuenda uko.
EGP: Nhetembo. Ini handisi mudetembi, baba vangu nemwanakomana vari, ndiri muverengi wenhetembo, uye ndinokudzwa.
EGP: Ndapedza Mwanakomana wababa naVíctor del Arbol uye ini ndinoikurudzira chaizvo. Uye ini ndinotanga ne Kuita sei naJenny Odell uye 1794 kubva Natt och Dag, ini ndinokuudza sei. Y Ndiri kunyora yangu inoverengeka inotevera, nyaya inotyisa iyo yandinotarisira kuendesa kumuparidzi munaGunyana.
EGP: Ndine chokwadi chekuti denda richauya kwatiri tese tinonyora mune edu ese nyaya. Munyori ndiye anorarama, kwete izvo zvakakosha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Esteban González Pons, munyori weEllas. Kubvunzurudza